Xog-warra: Maxaa sababay khalkhalka ka jira Itoobiya? - Caasimada Online
Home Warar Xog-warra: Maxaa sababay khalkhalka ka jira Itoobiya?
Xog-warra: Maxaa sababay khalkhalka ka jira Itoobiya?
Dibuhabaynta gudeed ee ERPDF waxa ay muujisay sida loo diiddan yahay hoggaanka dhexe ee ERPDF. December, 2017 bayaan ka soo baxay guddiga sare ee xisbiga talada haya waxa uu hoggaanka xisbiga ku eedeeyey dawlad-wanaag la’aan iyo in lagu fashilmay ilaalinta [nolosha] rayidka ee xilliga dibadbaxyada. Bayaankani waxa uu afarta xisbi ee Isbahaysiga ka tirsan ku dhiirigeliyey inay beddelaan hoggaamiyayaashooda—xisbiga TPLF ayaa sidan sameeyey wakhti yar ka dib. Sidoo kale, xisbiga SEPDF ayaa hadda weydiistey hoggaamiyayaashooda oo uu ku jiro Dessalegn inay xukunka banneeyan.